Zeevou | PMS mpandresy nahazo mari-pankasitrahana, injenieran'ny Channel & Engine Booking
PMS & Manager Channel nahazo loka
Zeevou dia rafitra fitantanana fananana sy mpitantana Channel izay manodina saika ny faritra rehetra amin'ny orinasanao fanofana mandritra ny fotoana fohy, manatsara ny fizotrany ary mampihena ny hadisoan'ny olombelona.
Seho izay hanova ny orinasanao indray mandeha sy ho an'ny rehetra
Tantano ny serasera rehetra (mailaka sy SMS) ho an'ny vahiny sy ny mpiasa amin'ny toerana afovoany iray ary araho ny zava-drehetra.
Ataovy mandeha ho azy ny fizotranao
Ny ekipanay ao amin'ny Zeevou dia namolavola endri-javatra tsy manam-paharoa maromaro, mifototra amin'ny fanehoan-kevitra avy amin'ireo mpampiasa anay izay ahafahan'ny vokatra mahafeno ny tena fiainana takiana. Mino izahay fa misy fanavaozana, fahombiazana ary fitomboana. Mampivoatra, mivoatra ary manao zavatra amin'ny fomba miavaka isika. Raha te hahalala izay mampiavaka antsika amin'ny fifaninanana dia kitiho eto ambany ny bokotra.
Ampitomboy ny zava-bitanao
amin'ny fampifandraisana amin'ny fantsona 200+
Fenoy ny alina bangao amin'ny alàlan'ny lisitra ny hofan-tranonao amin'ny fantsona betsaka araka izay azo atao eo am-pisorohana ny famandrihana be loatra. Tsinjara ny tombam-bidinao sy ny anananao amin'ny tsindry vitsivitsy amin'ireo fantsom-pirenenay mihoatra ny 200 amin'ny alàlan'ny fahafaha-mampifanaraka API 2-way mahery an'i Zeevou.
Ny automatisation no tena haintsika! Atombohy amin'ny famoahana ny fanananao ao amin'ny Zeevou, apetraho ny tahan'ny, anananao ary afatory ireo fantsona. Mitsitsia fotoana admin ary ampanjifao amin'ny fitomboana. Avy eo mipetraha, miala sasatra ary mankafiza!
Vonona hampitombo sy handanjalanja ny orinasao? Avelao i Zeevou hanao automatique ny asanao sy ny fizotranao manerantany. Mifantoka amin'ny fampitomboana ny tombom-barotra fotsiny ianao. Avelao izahay hanao ny fampiakarana mavesatra ho anao. Tsotra toy izany!
Zeevou dia tsy PMS sy mpitantana fantsona fotsiny. Izahay dia momba ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ny OTA. Andao hanambatra hery, hanakorontana ny indostria ary hahatsapa ny The Direct Booking Revolution! Fotoana toy izany!
Midira amin'ny sehatra famandrihana mivantana maimaim-poana
Tanisao ao amin'ny Zeevou Direct ny fanananao ary jereo ny vola mendrika avy amin'ny famandrihana mivantana mikoriana hatrany am-paosinao. Fantatrao ve fa ny ankamaroan'ny sehatra famandrihana dia mitaky 15-25% amin'ny sarany? Miaraka amin'i Zeevou Direct, samy mahazo mpifaninana tsara kokoa na ny mpampiantrano na ny vahiny satria tsy misy antoko fahatelo mitazona fanapahana. Fanampin'izany, tsy misy fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny mpampiantrano sy ny vahiny nohajanona, ka hanana fifandraisana mivantana sy mivantana ianao. Midira maimaim-poana izao ary ampio izahay hahatsapa ny Revolisiona Famandrihana mivantana! Tsy misy fatotra!
Kitapo vidin'ny vidin'ny vola ho an'ny filàna rehetra
Tsy misy komisiona, tsy misy mpampivelona, ​​tsy misy sarany miafina!
Ny fahafaha-manao ho an'ny Patron dia tsy misy farany. Esory ny herin'i Zeevou feno amin'ny fisoratana anarana amin'ny drafitra isam-bolana na isan-taona ary avelao ho anay ny ambiny. Midira amin'izay rehetra atolotry ny PMS an'i Zeevou, mpitantana fantsona ary motera famandrihana. Ankafizo ireo tombontsoa tsy voafetra ary miala sasatra.
Makà tranokala famandrihana mivantana amin'ny Internet sy mivantana ary ampidiro ny hofan-trano amin'ny sehatra famandrihana tsy misy komisiona, Zeevou Direct. Ataovy mandeha ho azy ny fanodinana ny famandrihana mivantana anao. Manatevin-daharana ny hery anio ary ampio ny tambajotran'ireo mpampiantrano mpiara-miasa hanitatra ny tratrantsika!
Teny ho an'ireo mpiaro fanao isan-taona
Arakaraka ny habetsaky ny fananana anananao no mahakely ny vola aloanao isaky ny singa.
Evanjelistra sa Patron?
Izay lazain'ny mpampiantrano anay momba anay
Voalohany, heveriko fa ny serivisy sy fanampiana azonao avy amin'i Zeevou dia mahafinaritra fotsiny. Ny fotoam-pivoriana, ny fifandraisana WhatsApp mivantana amin'ny mpampiofana anao, ny mpitondra hafatra amin'ny Facebook ary koa ny resaka an-tserasera amin'ny tranokala Zeevou. Tsy afaka nangataka zavatra bebe kokoa ianao. Toy ny zavatra hafa rehetra, mila fotoana vitsivitsy vao manao zavatra mandra-pahazatra anao ary hitako izao fa afaka mivezivezy amin'i Zeevou aho nefa tsy mila ireo lahatsoratra fanampiana sy FAQ izay fitaovana mahagaga ihany koa raha tianao ny manandrana zavatra amin'ny anao. tompony ary ampianaro ny tenanao. Izy io dia manana ny zavatra rehetra ilainao avy amin'ny kaody manan-danja, ny fandaharam-potoana fanadiovana, ny mailaka mandeha ho azy ary ny maro hafa ary faly aho fa nahita an'i Zeevou ary nanao ny fikarohana nataoko alohan'ny andehanana amin'ny olon-kafa.
Legendary servisy servisy servisy LTD
Nampiasainay i Zeevou nandritra ny herinandro vitsivitsy ary ny tombony manokana ho ahy dia ny serivisy. Ny fahafahako mamandrika fampisehoana mandritra ny ora iray dia fanombohana lehibe amin'ny diako Zeevou izay narahin'ny fivoriana an-tsambo 1.5 ora ary afaka nandefa hafatra momba ny fifandraisako tany Zeevou aho isaky ny tiako izany. Ny maha vaovao ny indostrian'ny fampiantranoana serivisy dia nampatahotra ary tsy mora i Zeevou hamaritana, fa ny fahitana lavitra an'ny orinasa miampy ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia midika hoe fantatro fa mahazo ny volako aho!
Vahaolana Green Wall Properties
Azoko lazaina amin'ny marina rehetra Zeevou dia nanova ny fiainako! Rehefa avy nandalo mpitantana fantsona 5 tao amin'ny orinasan'ny Serivisy Serivisy aho hatreto, hitako fa mety tsara amin'ny orinasanay. Tsotra fotsiny, Zeevou dia manao ny zavatra tena tsotra! Haingam-pandeha izy, tsotra be ilay izy raha ampiasaina. Hatramin'ny nidirako tao Zeevou dia nanana fotoana betsaka kokoa hifantohana amin'ny orinasako aho fa tsy hiditra ao! Amin'ny maha orinasa SA dia averinay tanteraka ny fampielezana mivantana ny boky. Zeevou dia manampy anao amin'izany. Mahagaga ny fanohanana azo, raha mametraka fanontaniana amin'ny vondrona mpampiasa Facebook aho dia manana valiny ao anatin'ny minitra vitsy. Zeevou dia fanomezana tokoa ho an'ny mpamatsy servisy fampiantranoana be atao. Misaotra anao!
Nanomboka tamin'ny singa zero aho fa te handeha amin'ny zavatra toy ny hoe manana 100 aho hahazoana antoka fa afaka mizana haingana sy mahomby aho. Zeevou dia tsy nanadino ny fitantanana ny fantsona ary nanao mivantana ny fivadihana mivantana, noho izy ireo niantoka famandrihana £ 10K tamina fijanonana 3 alina tamin'ny alàlan'ny Airbnb. Ny fandrosoana sy ny fanatsarana dia tsy miova ary mandray tsara ny hevitr'izy ireo izy ireo ary mampihatra ny fanovana narosoko izay tsy maintsy jerena. Na ilay lehilahy lehiben'ny tenany aza tsy mampaninona ahy ny mijery rehefa mikatso aho. Kitapo tsara dia tsara ary hahagaga ao anatin'ny iray na roa taona. Midira amin'ny revolisiona…
Zeevou dia nanampy ny Cliftonvalley Apartments hivezivezy avy amin'ny 3 ka hatramin'ny 15 unit. Zeevou dia fitaovana lehibe mamela antsika hitantana amin'ny fomba mahomby ny famandrihana, ny vahiny, ny mpampiasa vola ary ny ara-bola. Ny fampidirana amin'ny Signable, Xero ary Stripe dia tena nilaina tokoa ary nampihena ny asanay, ahafahantsika mifantoka amin'ny faritra hafa amin'ny orinasa. Zeevou dia manohy mivoatra rehefa mandeha ny fotoana ary vetivety dia tonga fivarotana tokana feno ho an'ny lafin-javatra rehetra amin'ny orinasan-tranonay servisy. Zeevou dia mazoto mihaino sy mampifanaraka ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa azy. Manantena izahay ny hanandrana ireo fiasa vaovao amin'izao fotoana izao amin'ny tondrozotra feno.
Ny sasany amin'ireo zava-bitantsika
"Tsy tokony ho reharehany ny tenany izay tia ny taniny, fa kosa ho an'izay tia an'izao tontolo izao. Ny tany dia firenena iray ihany, ary ny olombelona dia olom-pireneny." Bahá'u'lláh